– अनु विज्ञाति
“बिहे भएको एक हप्ता नपुग्दै, उहाँको व्यवहारमा परिवर्तन आउन थाल्यो । राती अबेर घर आउने, बिहान चाँडो अफिस निस्कने, मसँग कुरै नगर्ने । यो क्रम आज नौ महिना बितिसक्दा पनि चलिरहेको छ । उहाँले मलाई श्रीमतीको दर्जा अहिलेसम्म दिनु भएको छैन । लौ तपाईंहरू नै भन्नुहोस् उहाँसँग म कसरी बस्ने ?” रुबिनाले श्रीमानको व्यवहारप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै छुट्टै बस्ने वातावण मिलाई दिन आग्रह गरिन् ।
न्यायिक समितिका सदस्यहरू बको ध्यानम् उनका कुरा सुनी रहेका थिए । म भने त्यो दृश्य र स्थान दुबैका लागि नौलो थिएँ । मेरो हातमा उनीहरूको मिसिल थियो । अझ भनौ उनीहरुले माग गरेको उनीहरूको भविष्य थियो ।
रुबिनाको शिकायतपछि प्रवेशको सफाईको पालो आयो । न्यायिक समिति संयोजकले प्रवेश तिर फर्किएर प्रश्न गरे– “रुबिनाको कुरा सही हो ?”
प्रवेश बोल्नु भन्दा अघि नै प्रवेशका आफन्तले अनुनय गरे । “बुहारी किन यस्तो कुरा गछ्र्यौ ? हामीले त तिमीहरू बिच कहिल्यै मन मुटाव भएको थाहा पाएका थिएनौं । हो, बिहे गर्न तिमीले पनि मानेकी थिएनौं । प्रवेशले पनि । तर तिम्रा अभिभावक र हाम्रो कुरा मिलेर नै बिहे भएको हो । दुबै राम्रो परिवारका । पढेँ लेखेका । तिमीहरूको भविष्य सुन्दर हुन्छ भन्ने सोचेर नै हामीले तिमीहरूको बिहे गराई दिएका थियौँ । एक जना पाका व्यक्तिले कुरा राखे । उनी प्रवेशका बुवा रहेछन् ।
“होइन तिमीहरू त धेरै दिनदेखि एकान्तमा खासखुस गरिरहेको देख्थेँ । केही महिना अघिदेखि नै बैठक कोठामा भन्दा बढी आफ्नै कोठामा गफिन थालेका थियौ । यसले त तिमीहरूको सम्बन्ध झन् गढा भएको संकेत गर्छ होइन र ? तर आज अचानक ?” अर्की अधवैंसे महिलाले आश्चर्य जनाइन् । उनी प्रवेशकी आमा रहिछिन् ।
प्रवेशले भने आफूलाई लागेको आरोपको कुनै खण्डन गरेन । मात्र यति भन्यो– “उहाँ मसँग बस्न चाहानुहुन्न भने यसमा किन जबरजस्ती गर्ने ? ठीक छ, उहाँलाई छुट्टै बस्ने व्यवस्था गरीदिनु होस् । के भयो र किन भयो तिर अल्झिएर समय बर्बाद गर्नुभन्दा उहाँको मागबमोजिमकै न्याय दिलाई दिनु । दुबैको टन्टै साप ।”
प्रवेशको ग्रीन सिग्नलवाला जवाफ आए लगतै पुनः छुट्टै बस्ने व्यवस्था मिलाई दिन रुबिनाले थप आग्रह गरिन् ।
न्यायिक समिति संयोजकले रुबिनाको माग सम्बोधन गर्दै भने– “कहीले काहीँ जानी नजानी मान्छेबाट गल्ती हुन्छ । कमी कमजोरी हुन्छ । यस्ता कमी कमजोरी सुधार्न हामीले एक अर्कालाई मौका पनि दिनुपर्छ । यसरी बिहे गरेको नौं महिनामै श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध विच्छेद गर्दै जाने हो भने त यो गाउँका धेरै जना एकल भै सक्नुहुन्थ्यो । त्यसैले दुबैले दुबैका कमीकमजोरी सुधारेर अब नयाँ शिराबाट जीवन जीउनु पर्छ । लौ भन्नुहोस् कस कसले के–के बानीमा सुधार ल्याउनु पर्छ ? हामी त्यही लेखेर तपाईंहरूको सहमति गराई दिन्छौँ ?”
संयोजकको कुरामा कसैको केही प्रतिक्रिया आएन । दुबै चूपचाप बसे ।
समितिका अर्का सदस्यले पुनः दोहोर्याए, “सुधार गर्नु पर्ने बानी भन्नु भएन त दुबैले ? कि दुबैको छुट्टिने बहाना हो यो ?”
अझै पनि दुबै बोलेन् ।
रुबिनाकी आमा र प्रवेशका बुबा आमा उनीहरुलाई मिलेर बस्न अनुनय गरिरहेका थिए । “मात्र नौं महिना भएको छ बिहे भएको । तेत्रो खर्च भएको छ । आज तिमीहरू छुट्टीएर बस्दा जोरीपारीले के भन्लान् ? समाजले के भन्ला ? हामीलाई मुख देखाउननै गाह्रो हुन्छ ।” उनीहरू सम्बन्ध बचाउन घिडघिडाई रहे ।
तर प्रवेश र रुबिनालाई त्यो कुराले कतै छुएन ।
धेरै समय न्यायिक समितिका सदस्यहरूले उनीहरूलाई मिलेर बस्न सम्झाए । उनीहरुका अभिभावकले पनि छुट्टाछुट्टै कोठामा लगेर निक्कै बेर सम्झाए बुझाए । तर कसैको केही सीप चलेन ।
“बिहे गरेको नौं महिनामा नै त्यो पनि आफ्नै राजीखुशीले सम्बन्ध तोड्दा हामीले किन अंश दिनुपर्ने ? बस्दै नबस्ने हो भने जाऊ तर, अंश दाबी गर्न पाउँदिनौ ।” सम्बन्ध बचाउन नसकेपछि सम्पत्ति बचाउन तिर लागे प्रवेशका बुबाआमा ।
रुबिनाले मुख खोल्नु अघि नै प्रवेशले भन्यो– “उसको भाग त दिनैपर्छ नी ! कहाँ त्यसो भनेर हुन्छ ? आजकलका केटीको भर हुन्न । राम्रोसँग नचिनी बिहे गर्दिन । बरु बिहे गर्ने खर्च त मलाई दिनुहोस् । म अष्ट्रेलिया जान्छु भनेकै थिएँ । त्यो बेला तेत्रो खर्च कहाँबाट ल्याउनु भन्नुभो ! जान दिएको भए यति बेला डलर थाप्ने बेला हुन्थ्यो । खुब त्यति पैसाले त बिहे हुन्छ भन्दै बिहे गरिदिनु भयो । अब तिर्नुुस् उल्टै । पैसा पनि गयो । म अष्ट्रेलिया जान पनि पाइन !” सबै दोष आमाबुवालाई खन्याएर रूबिनाको न्यायको लागि अघि सर्‍यो उ ।
न्यायिक समितिका सदस्यहरू मुखामुख गरे । सम्बन्ध सकिएपछि सम्पत्ति बचाउन तिर नलाग्ने पहिलो केश थियो सायद त्यो उहाँहरुको लागि ।
प्रवेशका बुवाआमा छोराको कुरा सुनेर जिल्ल परे । “तैंले कमाएको छ भने दे । हामी त हाम्रो सम्पति दिँदैनौ । जब घरजम हुँदैन भने अर्कोको सम्पतिमा के आँखा लगाउनु ?” निक्कै बेरपछि प्रवेशका बुवाको वाक्य फुटयो ।
“हामीसँग त्यति सम्पत्ति पनि कहाँ छ र ? जे जति छ त्यो पनि मेरो माइतीले दिएको । त्यो म कसैलाई बड्नेवाला छैन ।” आमाले अड्डी लिइन् ।
फेरी पनि रुबिनाले मुख खोल्नै परेन ।
“मम्मी यही मिलेर खुरुक्क नदिए, बेकारमा अड्डा अदालत धाउनु पर्छ । समाजमा इमेज अझै खराब हुन्छ । उतिनै पैसा सकिन्छ । र अन्तिममा सम्पत्ति पनि दिनैपर्छ । यति झन्झट व्यहोर्नु भन्दा त खुरुक्क उसको भाग दिउँ ।” फेरी पनि प्रवेशले सम्पति दिनुपर्ने कुरालाई जोड दियो ।
निक्कै बेरको छलफल र वादविवाद पछि सबै जायजेथाबाट प्रवेशको भागमा पर्ने सम्पत्ति हिसाब गरियो । र फेरी त्यहाँबाट रुबिनालाई आधा दिने र दुबैले अदालतमा गएर सम्बन्ध विच्छेद गर्ने सहमति भयो ।
प्रवेश र रुबिनाका आमा बुवा निन्याउरो मुख लगाएर बाहिरिए । सायद छोरा छोरीको मञ्जुरी विपरीत गरिएको त्यो विवाह सम्झेर पछुताएका थिए दुबै ।
विवादको निकास निस्किएपछि न्यायिक समितिका सदस्यहरु पनि बाहिरिए । अब इजलासमा म र उनीहरू मात्र रह्यौ ।
मैले प्रवेश र रुबिनालाई सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बोलाएँ । दुबै जना एक साथ मेरो छेउमा आए । जबरजस्ती बाँधिएको दाम्लो चुँडाएर भाग्न सफल भए झैं उनीहरुका आँखामा जीतको चमक छल्किएको थियो । दुबै निक्कै खुसी देखिन्थे ।
हस्ताक्षर गर्ने काम सकिएपछि, दुबैले पल्याक्क पुलुक्क यता उता हेरेँ । कोही नदेखेपछि सायद उनीहरुलाई खुसी साट्न मन लाग्यो । प्रवेशले हात मुड्की पार्दै रुबिना तिर लग्यो । रुबिनाले पनि उसै गरी । त्यो सौहार्दपूर्ण छुटाई र छुट्नुको खुसीमा उनीहरूले चेस गरेको देख्दा म छक्क परे ।
“अब जाँदा हुन्छ ।” मैले उनीहरूलाई बिदा गरे ।
निस्कनु अघि प्रवेशले रुबिनातिर फर्केर भन्यो– “प्लान सक्सेस भयो । अब डीलअनुसार तपाईंले पाएको सम्पत्तीबाट मेरो हिस्सा चाडै दिनु पर्‍यो । जति सक्दो चाँडो म उनलाई लिएर अस्ट्रेलिया जानेछु ।”
रुबिनाले हुन्छको भावमा टाउको हल्लाउँदै भनिन्, “मेरो त झन् जापानका लागि भिषा नै आईसकेको छ । खाली पैसाको अभावले प्रोसेस अगाडि नबढाएको । आफू त गएर, सेटल भएर, उसलाई तान्नु छ । पैसा कमाएर फेरि पनि दोस्रो डीलअनुसारको पैसा तपाईंलाई फिर्ता गर्नुछ । यताको डिभोर्सको कागज नबनाई उता बिहे दर्ता गर्न मिलेन । धन्न आज सबै भनेजस्तो भयो । अब भने बल्ल आफ्नो जीन्दगी जिउन पाउने कुरामा ढुक्क भएँ ।”
कथा : एक सलाम
बेल्ट टोपीको नोकरी सानो ठूलो जुनै पदमा भएपनि निक्कै कठिनै हुन्छ । बेल्ट टोपी लगाएपछि जिन्दगी बन्धनमा पर्छ । अनुशासनमा बस्नुपर्छ । पङ्चुअल हुनुपर्छ । फिटनेस् राख्नुपर्छ । जनताले नत्र कस्तो भुडे पुलिस वाला रहेछ भनेर कमेन्ट गर्छन् ।
बिहानै चार बजे उठेँ, सिम्सिमे पानी परिरहेको रहेछ र पनि निस्कें मूलसडकमा ‘मरनिङ्ग वाक’ । सडक खाली थियो । सडकमा कालिजका बथान सधैँ जस्तै मसिना ढुङ्गाहरू खोस्रिन्दै आहार खोजिरहेका थिए । सायद मसिना बालुवाका कण खाँदै थिए तर, कसरी पचाएको होला ? अँ मान्छेले पनि धेरै चिज यसरी नै जबर्जस्ती पचाँउछ त । लाज–सरम, बाबु बाबुनीले जनताबाट लिने घूस, भ्रष्टाचारी नेताले जनताको बजेट यिनै कालीजले जस्तै जबर्जस्ती निल्छन् र पचाउँछन् । म सोंच्दै आफ्नै रफतारमा अघि बडिरहेको छु ।
दशै आउँदैछ । मौसम चिसो–चिसो हुँदैछ दिन–दिनै । भदौमा पालुवा फेरेको चिउरीको रूख बाहेक सबै रूखका पातहरू पँहेला हुदैँ जाँदैछन् ।
म सँधै जस्तै किताम फाटकसम्म दौड लगाउँछु र फर्किन्छु । जबदेखि इप्का दवाई कारखानामा कार्यरत छु उसै दिनदेखि ।
त्यसदिन पनि किताम फाटक पुगेँ र केही साधारण व्यायाम गरें ।
अहो ! झट्ट याद आयो ।
आज वर्तमान माननीय मुख्य मन्त्रीको पश्चिम सिक्किमको टूर छ ।
हातमा बाँधिएको घडि हेरे छ बजेछ । सुनेको थिए वहाँको ट बजे जोरथाङ्गमा कार्यक्रम छ । वहाँको वारेमा धेरै सुनेको छु । मलाई कुनि किन उहाँलाई एक सेलुट हान्न मन छ र यो मेरो पहिलेदेखि कै घिडघिडो हो ।
समय कम छ । बैरेक पुगेर तयार हुन मलाई कम्तीमा ४५ मिनट समय लाग्छ त्यसैले पुलिस हो टाइम मेनेज कुदेर हुन्छ । आफ्नो रफतार नै समयको सठिक मेनेजमेन्ट हो ।
धेरै रफ्तारमा दौड लगाए र बैरेक पुगेर हतपत पोशाक लगाएर रोडमा उभिए । टाइममा पुगेको र आज उहाँलाई सेलुट गर्न पाइरहेकोमा मनमनै खुशि महसुस भइरहेको थियो ।
तत्काल कान्भाईको साइरन बज्यो । प्रथमतः कान्भाई कमान्डरलाई जोडले सलाम गरेँ । क्रमशः सबै गाडीलाई सेलुट गर्दै गएँ । मलाई थाहा थिएन कुन गाडीमा माननीय मूख्य मन्त्री सवार हुनुहुन्छ ।
अचानक एउटा गाडी रोकियो ।
गाडीको झ्याल खोलियो । भित्र मुख्यमन्त्री सवार हुनुहुँदो रहेछ ।
फेरि एक सेलुट
“जय हिन्द, सर !”
मेरो अन्तर हृदयबाट कहिले निस्क्यो मलाई नै थाहा छैन ।
म सावधान मुद्रा ठिङ्ग रोड किनारमा उभिएहेको थिएँ । छेउमा बोलाएर नाम सोध्नुभयो र दशैं राम्रोसँग मान्नु है भनेर एउटा पँहेलो लिफा मेरो हातमा राखिदिनु भो ।
मेरो र परिवारको हालचाल जान्नुभयो ।
म अवाक्क बने ।
हात हल्लाउदै जानुभयो ।
उहाँको टाइट सेडुल हुँदा हुँदै पनि सानो मान्छेलाई यति धेरै समय दिनसक्नु पनि टाइम मेनेजमेन्ट हो ।
मलाई त्यो लिफामा के छ भनेर खोतल्नु मन थिएन तर, मेरो एक सेलुटको प्रतिक्रिया यस्तो ढंगमा दिनुहुन्छ भन्नै मलाई कतै थिएन ।
लिफा खोलेँ । एउटा कार्डमा लेखिएको रहेछ– विजय दशमीको हार्दिक मंगलमय शुभकामनासहित यो भेट ।
कूल राशी २० हजार पनि लिफाभित्र रहेछ ।
जुरूक्क उठेँ र मुख्यमन्त्री ज्यूलाई फेरि एक सेलुट ठोके ।
कविता : सफलताको प्यास
– सूचना घिमिरे
लेखेर अरु र आफ्नाबारे
सावित गर्न खोज्छन् आफ्नो महत्वबारे
लेख्छन् लेखिरहन्छन् अरुलाई देखाउन
पढ्न भुल्छन् आफ्नै मन र भावना
कस्तो होडबाजी हो कमाउने
नाम पनि दाम पनि ।।
बिचमै कतै छुट्छ
मान्छे, भावना र इमान भने
बाँच्छन् प्यास लिएर
जति पिए पनि नमेटिने
अर्काले उछिन्छ कि भन्ने अत्यास लिएर ।।
बाँच्नु पनि सास फेर्नु जस्तो
सागर बिचमा प्यासी फसे जस्तो
सुनौलो भविष्यको कोर्रा
पाउ बिझाउने काँडा
केले रोक्ने यो प्यासलाई
उछिनेर अघि बढ्छन्
मानौँ, रेसमा दौडिरहेका छन् ।।
मान्छे हुन् वा घोडा ?
जित्नु छ जसरी नि
बेलगाम एकोहोरो दौडिरहन्छन्
थकित आत्मा लिएर ।
– विष्णु उप्रेती
स्तर नमिलेपछि त, दोस्ति पनि नहुने रहेछ ।
संसारै हेर स्वार्थको, दलदल सरि नै भएछ ।
सद्भावको पात्र यहाँ, भेटिएन कोहि पनि ।
विश्वास गर्ने त समयनै, अब खै कता गएछ ।
सम्बन्धको त्यो खिरिलो डोरी, चुटायौ तिमीले ।
अमृत भरिघडा यो अनायासै, फुटायौ तिमीले ।
बिना कारणै आएर आफै तिमी आवेशमा
नजानी नजानी सहयोगी हात छुटायौ तिमीले ।
पार्टीहरुको निरंकुश दासतालाई तोडेर जित्यौ ।
पैसा र नाताको चलखेललाई फोडेर जित्यौ ।
त्यसैले धेरै–धेरै बधाई र शुभकामना छ तिमीलाई ।
भ्रष्टाचार गरि, दुनो सोझ्याउने कुरा छोडेर जित्यौ ।
अब गाउँ शहरमा विकासको लहर, लिएर आऊ ।
शासक होइन सेवक हुने, संकेत सबैमा दिएर आऊ ।
भ्रष्टाचार र कमिसनको घिनौलो खेललाई भत्काउदै ।
सपना बोकेको झोला, च्यतिएला राम्रो सिएर आऊ ।
– दीनानाथ पोख्रेल, इलाम
सही याम हेरूँ बुझी घुल्न लागूँ ।
कला सिर्जनामा खुली झुल्न लागूँ ।।
हिमाली धरामा खुल्यो दिव्य मोती ।
हटाएर टन्टा उठी डुल्न लागूँ ।।
उडी व्योम चुम्ने लिऊँ लक्ष्य एक ।
बुनी प्रेममाला सँगै खुल्न लागूँ ।।
छ संगीत धारा नदीमै झुमेको ।
नियाली धरा यो खुली भुल्न लागूँ ।।
वनै झुल्छ लाली कलामा रमेको ।
यिनै सौख्य सारा घरै हुल्न लागूँ ।।
निदाएर मात्रै छ चिन्ता अनेक ।
बनी योग्य कर्मी स्वयम् फुल्न लागूँ ।।
सेरोगेट मदर !
– बलराम तिमिल्सिना
जब श्रीपेचलाई देखेपछि
शिर झुकायो र ढोग्यो
मेरो भनेको गणतन्त्रुले
एकाएक अचम्म भयो !
आफैप्रति आशंका भयो
जब सजिलै छिमेकीलाई चिन्यो
र हिन्दीमा सलाम गर्‍यो
अचम्मै अचम्म भयो !
म प्रसुती पनि भएकै हो
जन्माएकै हो बच्चा मैले
मेरो कोख साँक्षी छ
तर किन मिल्दैन बच्चाको डिएनए ?
बाऊको नमिलेको भए
भन्न सकिन्थ्यो तलमाथि पर्‍यो होला
यहाँ त आमासँगै मिलेन
क्या फसाद भयो, क्या अचम्म भयो !
यसरी दुःखद अचम्म भयो !
किन न्वारन गर्न कसिन्छ छिमेकी ?
किन मुख बिगार्छन् घर परिवार ?
किन मिल्दैन डिएनए बच्चाको ?
सायद प्रसब मुच्र्छनामा हुँदा म
कसैले साट्यो मेरो बच्चा
र राखिदियो कसैले अर्कै
र त यो बच्चा म जस्तै छैन ।
अर्कै मतिको छ, अगतिको छ !
कति माया गरेर बोलाउँथे म –
‘प्यारो गणतन्त्रु !’
ऊ माझी औंलो देखाउँथ्यो मलाई
लगातार यस्तो भएपछि
सरदर आमाले सोच्नै नसक्ने
यौटा भयानक निस्कर्षमा छु म –
यो बच्चा मेरो होइन
यो अरु नै कसैको बच्चा हो
खै मेरो गणतन्त्रु ?
यो श्रीपेच ढोग्ने असती
मेरो गणतन्त्रु हुन सक्दैन
एउटी आमाको कठोर निष्कर्ष हो यो–
यो बच्चा मेरो होइन !
कतै म थाहै नपाई
सेरोगेट मदर त भइँन
यो बेमान बच्चाको ?
इतिहासले कति भद्दा मजाक गर्छ !
आई रियल्ली फिलिङ–
एम आई राइट ?
– गणेश लोहनी, चितवन (हाल : पोल्याण्ड)
चिनी मात्र किन र नुन पनि बन्द गर
ढोँगी बाबाको भेष धुन पनि बन्द गर
साँध सीमाना चेप्छौ भूमि कब्जा गर्छौ
निशाचर ‘रअ’८ को बैगुन पनि बन्द गर ।
अहंकारको शिखरमाथि चढि चढि खोक्छन्
नअघाउने अगस्तिहरू भेटे जति धोक्छन्
शरीरले साथ छोड्यो विवेक बास बसिसक्यो
अन्ध भक्तहरू भने काँधैमाथि राखि बोक्छन् ।
के गर्दैछौ भनि नसोध मस्तिमा जिइरहेछु
जता जताबाट फाट्छ उतै उतै सिइरहेछु
जमाउने कोसिसमा झनै पन्यालो बनेको
तरल जिन्दगी घुट्को घुट्कोमा पिइरहेछु ।
जनताले जिताउँछन् राजिनामा लिन्छन् नेता
“पार्टी हितमा कामगर्नु” निर्देशन दिन्छन् नेता
राजिनामा स्वीकृतिको त्यान्द्रोले बाँधिएकाका
दृष्टिमा अविवेकी निरंकुश ठानिन्छन् नेता ।
– बिमुन्स पौडेल, पोखरा कास्की
निर्दयीताको रूप भयंकर छनक नपाई
निर्बल अबला यसरी फँस्छिन् बेचिनलाई ।।
बन्दछ प्रेमी बाँड्दछ माया अतुल किसिमको
प्रतिदिन उसले गोप्य तवरले खन्दछ खाई ।।
जीवन चोर्‍यो हरदम लुक्दै उसले सजिलै
लाज चिहायो डगरडगरमा ढोल बजाई ।।
बोक्दै छ विम्ब सागर जस्तै प्रश्न हियामा
बिचलित पार्ने उत्तर देऊ भन्दछ आई ।।
बग्दछ आँखा असफलताको धाप पिएर
दुस्मन हाँस्दै सुखद प्रहरको दिन्छ बधाई ।।